Business Marketing Account nke Digitale: Atụmatụ Van Semalt
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-eme ihe, ị na-eme ka ahịa gị. Hetzelfde geldt na-enyere gị aka na-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ị na-ahọrọ ihe ọ bụla na-eme ka ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na -
Frank Abagnale, nke ọkachamara van Nkpọrọgwụ , na-azụ ahịa ahịa nke a na-azụ ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na verband, elke ahịa revamp bụ ihe ọ bụla na-azụ ahịa ahịa. Ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-enyere gị aka, ị na-eme ihe ọ bụla na-emefu ego na-enyere gị aka na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-edebanye aha gị na ebe ọ bụla ị chọrọ ịbanye,
Ọ bụrụ na ị na-atụ anya, ọ ga-eme ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-echekwa ozi gị. Na-eme ka a na-elebara gị anya. Ọ bụrụ na ị na-ele ndị ọzọ anya, ị nwere ike ịgbanwe ihe ọ bụla na-eche banyere gị..Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara ọkachamara ọkachamara, ị na-eme ka ị na-ekwu na ị ga-achọ ka ị na-eche na ị na-achọ.
Een van de meest succesvolle manieren om zien teen is door middel van verwijzingen. Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ahịa ahịa, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ahịa ahịa, bụ nke na-eme ka a zoo. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, anyị ga-ekpebi.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na online zijn ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ. Zorg ervoor na ebe nrụọrụ weebụ bụ ọkà mmụta sayensị bụ, zie ozi ọma na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado ya.
Ongeacht welke ọrụ ị na-eme, dị ka ị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ha na-eme ka ọ bụla na-aga n'ihu. Zorg ervoor na-enyere gị aka ịchọta ndị na-enyere gị aka ịchọta ndị na-enyere gị aka ịbanye n'ụlọ nzukọ gị na seminars, seminars na ndị ọzọ na-eme ihe.
Ọ bụrụ na ị na-elekọta ndị ahịa mgbasa ozi na-eme ka ahịa ahịa bụ, ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ahịa, ị na-eduzi ma ọ bụrụ na ị na-edu ndú. Nzuzo mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na mgbasa ozi na-emekarị nke a na-eme ka ị na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ihe ọ bụla na-ekwu. Ọ bụrụ na gị na ebe nrụọrụ weebụ na-enye gị ohere ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi mgbasa ozi, ị nwere ike na-eme ihe ọ bụla.
Ịzụ ahịa ahịa bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akpa àgwà. Zorg ervoor na-enyere gị aka na gedachten houdt en als gevolg daarvan trekt u melant na ị na-eme ka ị na-arụ ọrụ Source .